Soomaalida ku nool Denmark oo qayb ka ah dambiyada ay gaystaan Muhaajiriintu – Radio Daljir
Soomaalida ku nool Denmark oo qayb ka ah dambiyada ay gaystaan Muhaajiriintu
Juunyo 6, 2019 10:15 b 1
Wasiirka Caddaaladda ee dalkaasi, Søren Pape Poulsen waxa uu maanta sheegay inay dhibaato weyn ku qabaan Dembiilayaasha Muhaajiriinta, wuxuuna difaacay Tallaabooyinka cusub ee Dowladda u fududeynayo inay Muhaajiriinta u masaafuriyaan dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan.
Hadalkiisa ayaa yimid, isagoo tixraacayo Cilmi-baaris uu Wargeyska shabiyadda ku leh dalkaasi ee Breitbart (BT) ku shaaciyey inay Soomaalida yihiin Muwaadiniinta shisheeyaha ku nool Denmark oo lagu helay 916 Dembi muddadii u dhexeysay sannadihii 2014-kii ilaa 2018-kii.
“Xogtiina waxay si cad u muujisay inaan dhibaato weyn ku qabno Dembiilayaasha shisheeyaha oo aan ku qabin Bulshadeenna” ayuu yiri Wasiirka Caddaaladda ee dalkaasi, Søren Pape Poulsen.
Waxa uu intaasi ku daray inay dhawaan miiska soo saareen go’aan kale oo Garsoorayaasha u oggolaanaya inay bixiyaan Amarka lagu musaafurinayo Muhaajiriinta diida inay soo laabtaan taariikhaha ay Maxkamadaha leeyihiin.
Wargeyska Denmark ka soo baxa ee Breitbart (BT) ayaa qoray in qofka Soomaalga uu jecel yahay inuu dembi galo in ka badan 3.6 jeer marka la barbar dhigo Ninka u dhashay Denmark ee ay isku da’da iyo isku dakhliga yihiin.
Wargeyska waxa uu dib-u-eegis ku sameeyey xukunnadda ay ku jiraan dilalka iyo Isku-dayga dilka iyo Dembiyadda rabshadaha leh iyo falalka dhaca ee ka dhacay dalkaasi muddadii u dhexeysay bishii Janaayo ee sannadkii 2014-kii ilaa bishii November ee sannadkii 2018-kii, iyadoo ay Muhaajiriinta Soomaalida ku nool dalkaasi ay noqdeen kuwa ugu sarreeya falalka Dembiyadda.
Tiro-koobka Dembiyadda ka dhacay dalkaasi waxaa lagu muujiyey inay dadka Soomaalida galeen 1,111 falal-dembiyeedyo, waxaana ku xiga Muhaajiriinta ka soo kala jeeda dalalka Iraq iyo Turkiga.
Sannadkii la soo dhaafay, Wasiirka Socdaalka ee dalka Denmark, Inger Støjberg waxay si toos ah ula hadashay Muhaajiriinta ku nool dalkaasi, waxayna ku boorisay inay dalkooda dib ugu laabtaan, kana qeyb galaan Dib-u-dhiskiisa.
“Haddii aadan muddo dheer u baahnayn Badbaadinteena iyo inaysan noloshiisa khatar ku gelaynin dalkiina hooyo, gaar ahaan Somalia, waa inaad dib ugu laabataan Hoygiina iyo Dib-u-dhiska dalka aad ka timaadeen” ayey tiri Wasiirka Socdaalka ee dalkaasi.
Bilowgii sannadkan, Ra’isul-wasaaraha Denmark, Lars Løkke Rasmussen waxa uu hadlay arrintaasi, isagoo sheegay inuu door-bidayo inay dadka Soomaalida si iskooda ah uga baxaan Denmark, wuxuuna meesha ka saarin Masaafurin.
Ciidamo u dhashay Ugandha oo Billado lagu abaalmariyey
DEMBIYADDA MA MUHAAJIRIINTA UUN BAA GASHA?.MA AHA SAKHRAAN KASTA OO CUNSURI AH OO XOOLAHA KALIITA INAANU QIIMAYNO WARKIISA.
LKN DORASHADII DENMARK WAXAA KUGUULEYSTEY KUWA MUHAAJIRIINTA TAAGEERA.